July 2019 - Swelsone News
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကို သေဆုံးလျှက်ပြန်တွေ့
မကောင်းသော အတတ်ပညာ မျိုးစုံတို့ဖြင့် ပြုစားစီရင် မနှောင့်ယှက်စေနိုင်သော အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်း
၁၇. ၁၀. ၂၀၁၉ မှ ၂၃. ၁၀. ၂၀၁၉ ထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
ချစ်သူကောင်လေးကို မီးနဲ့ရှို့ပြီး စိမ်ပြေနပြေ ထိုင်ကြည့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကို ထောင်နှစ်(၆၀)ချခံရ
ချစ်တင်းနှောစဉ် အကာအကွယ်ကို ချွတ်ခဲ့တဲ့ချစ်သူကို မုဒိမ်းမှုနဲ့တရားစွဲတဲ့ ကောင်မလေး
July 31, 2019 space	0 Comments
မလေးရှားနိုင်ငံက အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ ချစ်သူနဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူ ချစ်တင်းနှောစဉ်၊ သူမရဲ့ ချစ်သူက အကာအကွယ်ကို ချွတ်ပစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကို မုဒိမ်းမှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ဇူလိုင်(၂၀)ရက်က ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Kajang မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Dzaffir
သစ္စာဖောက်သွားတဲ့ ဒေါက်တာမလေးကို ရက်စက်စွာလက်စားချေခဲ့တဲ့ ရည်းစားဟောင်း
ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် အင်စတာဂရမ် မော်ဒယ်မလေးတစ်ယောက်ဟာ အဝတ်မဲ့အနေအထားနဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှာ သေဆုံးနေကြောင်း သိရပါတယ်။ သူမဟာ ဓားဒဏ်ရာတွေ ပရဗွနဲ့ဖြစ်ပြီး အလောင်းကိုတော့ တရားခံက သူမရဲ့ အခန်းထဲက အဝတ်စားအိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားခဲ့တာပါ။ မော်ဒယ်မလေးနာမည်က
အင်ဒိုနီးရှား သင်္ဘောပေါ်မှာ အရောင်းစားခံလိုက်ရပြီး (12)နှစ်လုံးလုံး အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသူတစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်ချက် ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
စာ ဖတ်ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါ….ယခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ရုပ်သံကတော့…. ခင်မင်ရင်းနှီးသူတစ်ယောက်ကို ယုံကြည်ခဲ့မိတဲ့အတွက် အင်ဒိုးသင်္ဘာပေါ်မှာ ၁၁ နှစ်ကျော် ဒုက္ခခံစားခဲ့ရသူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြန်လည်ပြောကြားချက် ရုပ်သံဖြစ်ပါတယ်…. သင်္ဘောပေါ်ရှိနေချိန်မှာ သေနတ်နဲ့ ခြိမ်းချောက်ပြီး…. ထွက်မပြေအောင်တားမြစ်ခံခဲ့ရပြီး.. ကမ်းကပ်တဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်မှ ထွက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး….” ယောကျာ်းဖောင်စီး ၊ မိန်းမ
အင်းစိန်မြို့နယ် တွင် ရေခဲသေတ္တာထဲက ရေခဲထုပ် ယူရာ မှ ဓါတ်လုိက် သေဆုံးမှုဖြစ်
အင်းစိန်မြို့နယ် တောင်သူကုန်း ရပ်ကွက် ၌ ဓါတ်လိုက်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ၂၀၁၉ ခု ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့က တောင်သူကုန်းရပ်ကွက် နေ ဒေါ် မြင့်မြင့်ရီ(သေဆုံး) ၏ သမီးဖြစ်သူ ကိုယ်ပူ ၍
ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဟာ သူမ သမီးရဲ့အဖြစ်ကို အခြားမိဘများဆင်ခြင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည် အသိပညာပေး ဖြန့်ဝေမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူမရဲ့သမီးမှာ အသက်(၄)နှစ်သာရှိသေးပြီး၊ မအင်္ဂါထဲကို ဝင်ခဲ့တာပါ။ မိုးရာသီမှာ ခြင်နဲ့
အာပုပ်ဆော်နံတာ၊ သွားမှာကျောက်တည်တာနဲ့ သွားချိုး (ဂျိုး) တက်တာတွေကို ပျောက်ကင်းစေမဲ့ သဘာဝသွားတိုက်ဆေး
သွားနဲ့ခံတွင်းကျန်းမာရေးက သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ စကားပြောဆိုဆက်သွယ်ရမှာ ခံတွင်းနံ့မဆိုးဖို့လိုသလို အပြုံးချင်းဖလှယ်ရာမှာ ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအတွက် ဘယ်လိုသွားတိုက်ဆေးတွေ ဝယ်ယူအသုံးပြုရမလဲလို့ တွေးနေပြီလား။ အဲဒီလို ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ သွားတိုက်ဆေးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း အုန်းဆီသန့် စားပဲတင်ဇွန်း ၂
တူမနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဦးလေးက၊ တစ်ခြားသူနဲ့အိပ်ခဲ့တဲ့ ‘တူမ’ကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်
ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ တူမအရင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားက၊ အဲဒီကောင်မလေး တစ်ခြားယောက်ျားနဲ့ အိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ သံသယရှိပြီးနောက် သေနတ်နဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ ပစ်သတ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသားဟာ ဇနီးနဲ့စပ်မှ အဲဒီကောင်မလေးနဲ့ မဖြစ်မနေ တော်ရတဲ့ ဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။
July 31, 2019 July 31, 2019 space	0 Comments
ကျားဆိုရင်အဖေအဖိုးဦးလေးဆွေမျိူးရင်းဝမ်းကွဲအကုန်မယုံကြပါနဲ့တော့ကာယကံရှင်မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သိရှိရအောင်လို့တင်ပေးပါတယ် ကျားဆိုရင်အဖေအဖိုးဦးလေးဆွေမျိူးရင်းဝမ်းကွဲအကုန်မယုံကြပါနဲ့တော့ကာယကံရှင်မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သိရှိရအောင်လို့တင်ပေးပါတယ် သနားလိုက်တာဒေါသလဲထွက်တယ် ကျားဆိုရင်အဖေအဖိုးဦးလေး ဆွေမျိူးရင်း ဝမ်းကွဲအကုန်မယုံကြပါနဲ့တော့ Stop Child Sexual Abuse(ကာယကံရှင်မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သိရှိရအောင်လို့တင်ပေးပါတယ်) Kallanပြောချင်တာအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့abuseခံရတဲ့(လောလောလတ်လတ်ကြီးကိုယ့်မျက်စိရှေ့တင်ဖြစ်ပြီးကိုယ့်နားကကလေးတယောက်)အကြောင်းပြောချင်ပါတယ် Kallanကအိမ်မှာမူကြိုအရွယ်ကလေးတွေကိုEnglishစကားအသုံးနှုန်းနဲ့စကားလုံးတွေပိုပြီးသိလာအောင်သင်တန်းလိုမျိုးလေးတစ်ခုဖွင့်ပါတယ်ရင်းနှီးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကလေးလေးတွေလာတက်ကြပါတယ်..ကလေးလေး၅ယောက်ကိုစာသင်နေရတဲ့ဆရာမပေါက်စနလေးပါ… Kallanကတစ်ပတ်ကို၎ရက်သင်တာဖြစ်ပြီး၎ရက်ထဲက၁ရက်ကတော့ရင်ဖွင့်ချိန်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရက်ပါ Sundayတိုင်းကရင်ဖွင့်ချိန်လို့နာမည်ပေးထားပြီးတချို့လေးတွေကလည်းစာမသင်တော့မလာဘူး..တချို့ကျတော့လည်းအိမ်ကထိန်းမနိုင်ဘူးဆရာမရေ..သွားမယ်လို့ပြောနေလို့လွှတ်လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးလာပါတယ် အဓိကကအခုမှစတာပါ… ရင်ဖွင့်ချိန်ကိုတစ်ခါမှမလာဖူးတဲ့ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်…English classမို့လို့သူ့ကိုပေးထားတဲ့Englishနာမည်ကိုမရေးတော့ပါဘူး..အသိထဲကတွေ့သွားရင်ဘယ်သူလဲသိနေမှာစိုးလို့ပါ…roseလေးလို့ပဲခေါ်မယ်နော်…roseလေးကဆံပင်အရမ်းကောင်းတယ် ဗိုက်လေးပူပူ
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့ ၌နင် ငါချစ်နေတာကိုဘာလို့ ယောကျာ်းယူသွားတာလဲ ငါချစ်နေတာကို မသိဘူး လား”ဟုပြောပြီးသားမယား ပြုကျင့်သူ
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့ ၌ မုဒိန်ိးမှုကျုးလွန်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူအား( ၁၄ ) ရက်အကြာ ၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၂၀၁၉ ခု ဇူလိုင် ၃၁ ရက် ယနေ့ မွန်းလွဲ
ကင်ဆာ အဆင့် (၄) ဆေးရုံက ( ၆ )လ ပဲ နေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ သူ ယခုအကုန်ပျောက်ပြီဟု မှတ်လိုက်ပါပြီ ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၅ လပိုင်းမှာ အသဲကင်ဆာ ဖြစ်နေမှန်း စ သိရပါတယ် ။ စင်ကာပူမှာ အသားစ စစ်ဆေးပြီး အဆုတ်နဲ့ အရိုးကို ပြန့်နေလို့ အသဲအစားထိုးရင်လဲ ၅၀% ပဲ ဆိုလို့ မလဲဘဲ